ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့…ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့…ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ	3
ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့…ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ
Posted by သျှားသက်မာန် on Jan 5, 2017 in Travel |3comments
🌅🌅🌅 “သာမောစွ …. ကမ်းအလှဌာနေ ၊ ကဗျာဝကမ်းခြေ … မွန်တို့ဌာနေ”တဲ့အဲ့ ကဗျာလေးကိုဘယ်တုန်းကဖတ်ဖူးမှန်းမသိပေမဲ့..မှတ်မှတ်ရရနဲ့ စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရေးမြို့ ကညီမလေးတစ်ယောက်ကဖိတ်လို့ တစ်ခါတစ်ခေါက်အလည်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
#ကိုရင်လေးတည်ထားတဲ့လေးမျက်နှာဘုရား (0r) Banana Mountain 🙏🙏
#သေမင်းတမန်ရထားနဲ့ ပြတိုက် 🚊🛤🛣
ရန်ကုန်ကနေ ကဗျာဝအထိ တိုက်ရိုက် အဝေး ပြေးကားလမ်းတွေ မရှိသေးပေမဲ့ ရေးမြို့ကတစ်ဆင့် သွားမယ်ဆိုရင် ကဗျာဝကျေးရွာကို ရောက်ပါတယ်။ ခုဆိုရင်နေ့ ချင်းပြန်ခရီးစဉ်လေးတွေဆိုိပြီးဆွဲနေတဲ့အေဂျင်စီတွေလည်းရှိနေပါပြီ။ကိုယ်
ခရီးစဉ်လေးစတင်တဲ့အချိန်ကတော့ ည(၈)နာရီပေါ့နော်..လမ်းမှာကျန်းမာရေးအပေါ့အပါးအတွက်ခဏရပ်ပြီးရေးမြို့ ကို
တောက်လျှောက်မောင်းနှင်တာဟိုကိုမနက်အစောကြီး (၅)နာရီကျော်မှာရောက်သွားတယ်။မနက်စာစားဖို့ ကျတော့လည်း
စောနေသေးလို့ ကိုယ့်ဧည့်သည်တွေကိုခဏအိပ်ခိုင်းထားပြီးမနက်စာစားဖို့ တွေပြင်ဆင်ရတာပေါ့။မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ 
သွားဖို့ ကားဆက်ငှားဖို့ လိုပါတယ်။
ခရီးစဉ်နေရာအသစ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ စွန့်စားခရီးသွားတွေအတွက် အရိုင်းဆန်ဆန်လှနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်၊
ရေးမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ကဗျာဝကမ်းခြေကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ ကွမ်းသီးစိုက် ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ပါတယ်။ကမ်းခြေပေါင်းများစွာနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ရေကန်၊ဘုရား
တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခုတည်းသောချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့မြို့ လေးပါ။ ❤️💚💜💙💛
ဒီဘုရားကိုသာသနာ၂၅၀၀ ဘုရားလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။သူကရေးမြို့ ထဲမှာရှိတာပါ။ငါးစာလည်းကျွေးလို့ရပါတယ်။
#ကဗျာဝကမ်းခြေ (0r) ရေးမြို့ ရဲ့ အလှဆုံးကမ်းခြေ ⛱🏊🌴🕶🔅🚤
ကဗျာဝကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ သဲသောင်ပြင်က ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေ အများဆုံးသွားတဲ့ချောင်းသာကမ်းခြေထက် ပိုလှပြီး ပင်လယ်ရေ က ငွေဆောင်ကမ်းခြေလောက်တော့မကြည် လင်လှပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ မှာရှိတဲ့သဲမြေကတော့ချောင်းသာတို့ 
ငွေဆောင်တို့ မှာမရှိပါဘူး။နင်းရက်စရာမရှိအောင်ကိုနူးညံ့လွန်းလို့ မွန်လေးဆိုဖိနပ်မစီးတော့ဘဲကမ်းခြေတစ်လျှောက်လျှောက်သွားနေတော့တာပါပဲ။တခြားပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာလည်း တွေ့ရနည်းတဲ့ ထင်းရှူးပင်လေးတွေက ကဗျာဝ
ကမ်းခြေမှာစီတန်းပေါက်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ထင်းရှူးတန်းလေးကို ကျော်လိုက်တာနဲ့ ပင်လယ်ရေကျချိန်ဆိုလှပတဲ့
သဲသောင်ပြင် ကတစ်ဆင့် ကဗျာဝရွာကို လမ်းလျှောက်သွား နိုင်ပါတယ်။ရွာအနားရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ယိုင်းနဲ့နေ တဲ့ဒေသခံ ပင်လယ်လုပ်သားတွေနဲ့ အိမ် တန်းလေးကိုအရင်ဦးဆုံး မြင်တွေ့ရမှာပါ။အဲဒီအိမ်
တန်းလေးတွေလွန်တာနဲ့ ကဗျာဝ ရွာကို ရောက်ပါတယ်။ ကမ်းခြေက ရွာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိနေတာမို့ အနည်းငယ်
ဆက် လျှောက်လိုက်တာနဲ့ အမိုးရောင်စုံအောက်မှာခင်းထားတဲ့ စားပွဲဝိုင်းလေးတွေ၊ သောင်ပြင် မှာစုပုံထားတဲ့ဗောကွင်း
တွေနဲ့ အပြေးအလွှားရေကစားနေတဲ့လူတွေကို မြင်ရပြီဆိုရင် ကဗျာဝကမ်းခြေကို ရောက်ပါပြီ။ကမ်းခြေအရှည်က သုံးမိုင်လောက်ရှိပါတယ်။ကမ်းခြေ နဲ့ ကပ်လျက်မှာ သဘာဝအတိုင်း ပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်အုပ်တွေနဲ့ကျောက်တောင်၊
ကောင်းကင် နဲ့အပြိုင် ပြာလဲ့နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီလိုအလှအပတွေရှိတဲ့ ကဗျာဝကမ်းခြေကချောင်း
သာကမ်းခြေလိုခရီးသွားတွေအကြိုက်ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက အပန်းဖြေစခန်းစီမံကိန်းတွေစ
တင်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ညအိပ်တည်းခိုစရာ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းတွေတော့ကောင်းကောင်းမတွေ့ ခဲ့သေးပါဘူး။ ပင်လယ်ကမ်းခြေဖြစ်တာကြောင့် လတ်ဆတ်တဲ့ ပင်လယ်စာတွေကို ဖောဖောသီသီရရှိနိုင်ပြီးဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း
သင့်တင့်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ရွာထဲအထိ လမ်းမကောင်းသေးဘူး။ လူ ၄၅ ဦးပါတဲ့ကားဆိုရင်လမ်းအဆုံးထိကားဝင်
ကဗျာဝ ကမ်းခြေမရောက်ခင် မွန်ပြည်နယ်က သာသနာပြုကိုရင်လေးလို့လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်တည်ထား
ကိုးကွယ်တဲ့ ကိုရင်လေးဘုရားကိုဝင်ရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါ တယ်။ကိုရင်လေးဘုရားပေါ်ကနေကြည့်ရင်ရေးမြို့အလှနဲ့
ကမ်းခြေမှာ စိတ်တိုင်းကျ ပျော်ပါးခဲ့သမျှ အပန်းပြေစေဖို့ အပြန်လမ်းမှာသံဖြူဇရပ်က 21Paradise Natural Hot Spring လို့ ခေါ်တဲ့ဝဲကလီရေပူစမ်းမှာ အနားယူနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းပူနွေးနေတဲ့ရေပူစမ်းမှာရေစိမ်ပြီးနောက်
ရေကူးကန်မှာ ရေကူးလို့ ရပါတယ်။(မွန်လေးတို့ ကတော့အချိန်ကိုငဲ့ညှာသောအားဖြင့်မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကျ
ဂျပန်ခေတ်က သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်းနဲ့ပြတိုက်ကိုဝင်ပြီးselfie, wefie တွေအမုန်းဆွဲခဲ့ပါတယ်။
#ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ ထူးခြားချက် ❗️
မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ မှာမွန်ဘာသာတွေနဲ့ သာရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ကြော်ငြာတွေကိုသာတွေ့ ရပါမယ်။ တချို့ ကတော့
မြန်မာလိုပါပါတယ်။တချို့ ကမြန်မာလိုတောင်မပါပါဘူး။ဘာအသံထွက်ရမှန်းမသိအောင်မွန်ဘာသာနဲ့ ရေးထားကြတာပါ။
ခု Hot ဖြစ်နေတဲ့ခရီးစဉ်လေးဖြစ်အောင်အားရင်သွားဖြစ်အောင်သွားလိုက်ကြပါဦးနော်…တခုခုတော့ရလာမှာပါ။😄
PS: အဲ့လိုခရီးတွေကိုလိုက်ပါခံစားချင်ရင်တော့ …Just Follow me!! ….မွန်လေးနဲ့ လိုက်ခဲ့လို့ရပါတယ်…..Free & Easy tour ပဲစီစဉ်ပြီးစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ကြမယ်…..0942104568
Shar Thet Man has written 155 post in this Website..
သျှားသက်မာန် says: ဒီပိုစ့်လေးကိုဘယ်သူမှလည်းမဖတ်ကြဘူးနဲ့ တူတယ်…ဘာမှလည်းမဝေဖန်ကြဘူး……ဒီရွာထဲမှာမွန်လေးပဲခုတလောအတက်
Log in to Reply	+1	12152
Thint Aye Yeik says: .ကြော်ငြာချည်း ဝင်နေတော့လည်း ဖတ်တဲ့သူတွေ ရိုး အီကုန်ပြီပေါ့ကွယ်
.ကြော်ငြာသဘောမျိုး မဟုတ်ပဲ ခရီးသွား အတွေ့အကြုံဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ရေးချင်ရာရေး တင်ချင်ရာ တင်ပိုင်ခွင့် သမီးမှာ ရှိပါတယ်ကွယ်။ ဦးတို့က အားရင် ဝင်ဖတ်ရုံပေါ့။ မဖတ်ချင်ဘူးဆိုလည်း မဖတ်ရုံပေါ့ သမီးရယ်
Log in to Reply	+1	325
သျှားသက်မာန် says: ကြော်ငြာဝင်သလို….ခရီးသွားဆောင်းပါးလေးတွေလည်းတင်ပါတယ်……